स्प्यानिश भाषा को6पुस्तिका। शैक्षिक पुस्तकहरू पनि दिन। | वर्तमान साहित्य
स्पेनिश भाषाको लागि केहि आवश्यक म्यानुअलहरू।
पेशेवरहरु, साधारण मानिसहरु, आम जनता र को फ्यान को लागी स्पेनिश को सही प्रयोग विशेषत। यी म्यानुअल स्पेनी भाषा को हो थप सन्दर्भ। किन तिनीहरूलाई क्रिसमस पनि नदिनुहोस्? को मूल्यहरु तिनीहरू सँधै बढी हुन्छन् सस्तो को लागि पकेट संस्करण.
La RAE, ला Fundéu, the Instituto Cervantes... फाँटमा मौलिक नामहरूले यी शीर्षकहरू प्रकाशन गर्दछन्, जुन कहिले कुनै पुस्तक पसलमा अभाव हुँदैन। अपरिहार्य हामी को लागि लेखकहरू, कपिराइटरहरू, प्रूफरीडरहरू, सम्पादकहरू, पत्रकारहरु, आदि वा न्यूनतम संग कसैको लागि भाषिक रूपमा सही संग चिन्ता, त्यसैले कहिलेकाहीं राजनीतिक रूपमा सही संग नमिल्दो मा।
1 रयल एकेडेमी स्पैनिश भाषा
1.1 नयाँ आधारभूत व्याकरण
1.2 मूल हिज्जे
1.3 स्पेनिशको राम्रो प्रयोग
2.1 सहि स्पेनिश पुस्तक
2.2 स्पेनीमा most०० प्रायः जसो शंका आउँछ
3.1 तत्काल स्पेनिश म्यानुअल
4 किन उनीहरूलाई दिनुहोस्
रयल एकेडेमी स्पैनिश भाषा
La अकादमी कुञ्जीको पहुँच भित्र छ जो कोहि को लागी उनको शब्दकोश को रूप मा हेर्नु पर्छ को रूप मा कुनै पनि भाषिक प्रश्नहरु उठ्न सक्छ। तर पक्कै पनि उनीसँग आफ्नो विशाल काम प्रकाशित छ। हामी पहिले नै भन्छौं कि जेब संस्करणहरू बढी किफायती छन्, र सबै भन्दा बढि प्रबन्धनीय। र तिनीहरू मौलिक र सामान्य कुराको केही पनि छोड्दैनन् जुन प्राय: परामर्श लिइन्छ। तर तपाईंले त्यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ भाषाको डिजिंग विकास सधैं यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रक्रियाको भन्दा छिटो हुन्छ "आधिकारिक"।
नयाँ आधारभूत व्याकरण
En तीन खण्डहरू हार्ड पेस्ट र मा पनि पकेट संस्करण। मा चित्रित थियो 2009।
को विस्तृत समीक्षा व्याकरण निर्माण संसारभर स्प्यानिशको विशिष्ट, यसको फोनिक, रूपात्मक र सिन्थ्याटिक भेरियन्टसँग। उसको मनसाय लागू गर्न को लागी होईन, तर गर्न को लागी गाईड गर्नुहोस् र सिफारिश गर्दछ वा प्रयोग गर्नुहोस् वा उनीहरूको विरुद्ध सल्लाह दिनुहोस् कारण दिँदै।
मा चित्रित थियो 2010। सबै भन्दा उल्लेखनीय थियो नयाँ सामग्रीको समावेश १ 1999 XNUMX। संस्करणको सम्बन्धमा। मुख्यतया ती यौगिकहरू, शब्दहरू वा उपसर्गित अभिव्यक्तिहरू, एक वा बढी शब्दहरूमा लेख्न सकिने अनुक्रमहरू, यस्तै अर्थको साथ, वा बिभिन्न अर्थहरू इत्यादिसँग सम्बन्धित छ)।
यो विदेशी वा उचित नामहरूको हिज्जेमा पनि विस्तार हुन्छ। र सबै माथि यसको शैक्षिक र जानकारीपूर्ण उद्देश्य कायम गर्न प्रबन्ध गर्दछ.
स्पेनिशको राम्रो प्रयोग
चित्रित 2013। सम्बन्धित छ norma भाषाविज्ञान, कुनै पनि स्तरको सबै स्प्यानिश स्पिकरहरूका लागि हो। सूचनामा द्रुत पहुँचका साथ तपाईको स्पष्टीकरण सहज र स्पष्ट छन्। उनीहरु छोटो, सादा भाषा अध्यायहरू धेरै उदाहरणका साथ। थप रूपमा, सब भन्दा साधारण मिससेटमेन्टहरूको बारेमा चेतावनी सुझावहरू हाइलाइट गरिएका छन्।
1991 मा सिर्जना गरिएको, यो एक संस्था शिक्षण, अध्ययन र संसारभरि स्प्यानिशको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ। उसले केहि अत्यधिक सिफारिश शीर्षक प्रकाशित गरेको छ।
सहि स्पेनिश पुस्तक
मा पोस्ट गरियो 2012 सँगै एस्पसा प्रकाशन घरको साथ। उपशीर्षक स्प्यानिशमा राम्रोसँग लेख्न र बोल्ने कुञ्जीहरू यो सबै पहिले नै भनिएको छ। यी कुञ्जी दुबै मौखिक र लिखित अभिव्यक्ति सुधार गर्न प्रस्तावित छन्। अघिल्लो जस्तै, योaमा लेखिएको छ रमाईलो र धेरै सरल शैली र RAE को शैक्षिक मानक अनुसरण गर्दछ।
मा सल्लाह हिज्जे दिशानिर्देशहरू, लेखन, सही बोली, गैर-मौखिक भाषा... र यसले सही र गलत प्रयोगहरूको व्यावहारिक उदाहरणहरू पनि देखाउँदछ। उनको विश्लेषण सामाजिक नेटवर्क को भाषा र संचार को नयाँ रूपहरु जस्तै ईमेल, एसएमएस, ब्लगहरू, आदि।
इन्स्टिटुटो सर्भेन्टेसको श्रृंखला प्रकाशित भइसकेको छ व्यावहारिक गाइड र यो शीर्षक तिनीहरूलाई पूर्ण गर्दछ।
स्पेनीमा most०० प्रायः जसो शंका आउँछ
अघिल्लोको सफलता पछि, यो अर्को काम हो आधारभूत र उपयोगी क्वेरी। यो रूप मा प्रस्तुत गरिएको छ प्रश्न र उत्तर एक सरल, व्यावहारिक र धेरै चुस्त तरीकाले। केहि उदाहरणहरू:
यस्तो भनिन्छ कि ओभरटाइम u थप घण्टा?, यो उस्तै हो इस्लामी que इस्लामिक? के तपाईं @ एकै समयमा दुबै लिंगलाई सन्दर्भ गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ? के प्रदर्शनकारीहरुलाई उच्चारण गरिएको छ?
सम्भवतः सबै भन्दा राम्रो शीर्षक सबै प्रकारका पाठकहरूको लागि।
RAE र Fundéu बाट थप म्यानुअलहरू
La तत्काल स्पेनिश फाउन्डेशन एक नाफा नकमाउने संस्था हो जसको मुख्य उद्देश्य हो मिडियामा स्पेनिशको राम्रो प्रयोगलाई बढावा दिनुहोस्। मा जन्म भएको थियो 2005, Efe एजेन्सी र BBVA बैंक बीच एक सम्झौता पछि। उनी रोयल स्पेनिश एकेडेमी द्वारा सल्लाह दिए काम गर्दछ। तिनीहरूको दैनिक सिफारिसहरू र पाठकहरूको जिज्ञासाको जवाफ हो अधिक तत्काल, कुशल र छिटो उपकरण अहिले के छ?
तत्काल स्पेनिश म्यानुअल
यो म्यानुअल १ 1985 XNUMX was मा प्रकाशित भएको थियो, तर फन्ड्यूले यसलाई अपडेट र संशोधनको साथ पुनः जारी गरेको छ। यो खोज्नु हो सन्तुलन आजको स्पेनिश र यति धेरै सम्पदाको रूपमा रहेको ऐतिहासिक सम्पत्ति बीच। यो पनि रूप मा संरचित छ प्रश्न र उत्तर मनपर्‍यो: सामाजिक मिडियामा संक्षिप्त रूपमा प्रयोग गर्न के उचित छ? कस्ता शब्दहरू इटालिकमा लेखिएका छन्?
किन उनीहरूलाई दिनुहोस्
यसको चरित्र द्वारा जानकारीमूलक र शिक्षाप्रद। र किनभने आजको संसारमा कुराकानी गर्ने धेरै तरिकाहरू संग, यो केवल हाम्रो भाषाको विकास जान्न मात्र आवश्यक छ, तर यसको सबैभन्दा सही प्रयोग पनि। र, विशेष गरी, ती राजनीतिक र सही प्रयोगहरूमा ती प्रयोगहरू छुट्याउन र भिन्न गर्न सिक्नुहोस्। तर पनि किनभने ती लागि आवश्यक हो गरीबी र भाषिक अज्ञानता विरुद्ध लड्नुहोस्, सामान्य पनि, जुन अभिव्यक्तिको सबै तहहरूमा हालसालै प्रबल देखिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » स्प्यानिश भाषा को6पुस्तिका। शैक्षिक पुस्तकहरू पनि दिन।
मेरो २०१ read को read पठनहरू। र तपाईंको?